"Medgorodok" (Togliatti) - igama enye yezindawo ezinkulu ezisemadolobheni imfundiso izibhedlela. Umlando waqala ne ukusungulwa ukunakekelwa ngezokwelashwa iphuzu, elisemnyango giant auto AvtoVAZ. Namuhla-ke is a multi-isikhungo yesimanje, lapho eya abantu abayizinkulungwane 200 ngonyaka.
Isibhedlela Clinical № 5 - isikhungo okuhlukahlukene yesimanje, omunye nezikhungo zezokwelapha esikhulu kunazo zonke eRussia. Ngo Togliatti, emtholampilo ngokuthi "Medgorodkom", futhi ixhunywe nge umlando wenhlangano.
Lesi sibhedlela bese kuthiwa eyakhelwe ukusevisa ifektri imoto, lo odumile AvtoVAZ abasebenzi nezakhamuzi Avtozavodsky wesifunda. Area of the complex ithatha amahektha 30 eduze ehlathini. Umsebenzi sokugcina ekwakheni izakhiwo zomphakathi uphelelwa eminyakeni 80. Isibhedlela kwaba ifektri umdlalo - kokuthuma kwaba kwekulu eSoviet Union.
Ngaphezu ingqalasizinda ngabezempilo eyinkimbinkimbi nezakhiwo zokuqondisa baba ihholo ekhonsathini lapho kubukiswa khona amafilimu ukuboniswa kwaphela ngo-2000. Enye emisha esikhungweni into isikhathi sonke imithi USSR waba helipad, kodwa ukusetshenziswa kwalo engakaze uqalise.
Ngo-2009, izinga lohulumeni kuxoxwa indaba kwezikhungo ukunakekelwa kwezempilo emigwaqweni federal ukusiza iziguli abaye bahlupheka kule ngozi. Omunye agumenti esivuna "Medgorodok" Isibhedlela (Tolyatti), njengoba umhlanganyeli hlelo, kwakuwukuba khona kwezithunywa helipad. Kusukela ngo-2010 travmtsentr esibhedlela uqalise.
"Medgorodok" Tolyatti - manje kahle ifakwe isikhungo esikhulu yezokwelapha elinabantu multi-service. ukwelashwa inpatient ezindongeni izikhungo kungathatha abantu 2408 ngesikhathi, ngoba ngawo kanye unyaka esibhedlela ukhonza iziguli 80 000. amasevisi iziguli nomtholampilo unyaka ngamunye abantu abangaphezu kuka-200 000. Perinatal Centre kusiza ukuba izozalwa ezingaphezu kuka-6,000 izingane uhlelo zokuxilonga uphakamisa 1 million ngonyaka ucwaningo.
Esikhathini isikhungo sokwelapha seziguli ezithola ukwelashwa kwasesibhedlela amagatsha angu-48, 5 Amahhovisi reception abasebenza ngoba isevisi kangcono. usizo lochwepheshe Rapid inikezwa 10-resuscitative izinzwa neminyango, 5 yokusebenza ukuhlinzwa amayunithi namahhovisi 17 paramedical. Ukuthola imitholampilo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya siqukethe 2 induduzo emsebenzini kwabasebenzi bezokwelapha futhi ukuhlala zeziguli 5 ukuhlinzeka imisebenzi yokweseka.
Iminyango kanye izikhungo
"Medgorodok" (Togliatti) ibuyisela ezempilo lisiza iziguli isethi on ezahlukene izifo. Amasevisi anikezwa yi-uhlelo umshuwalense wezempilo, noma imali ngesisekelo ukuba noma yisiphi isakhamuzi Russian noma engumfokazi. Lesakhiwo, iminyango elandelayo:
Midwifery futhi zokubelethisa.
Reanimation nomnyango izinzwa.
Zokwelapha kanye kusebenta kwahulumende.
Trauma Centre Level 1.
Centre for esikhundleni amalunga ezinkulu.
City AIDS Centre.
UMnyango ngamunye esibhedlela ifakwe ubuchwepheshe bamuva, okuyinto nakanjani kuthinta iqophelo ukwelashwa. abasebenzi Medical esibhedlela bayoqeqeshwa okuqhubekayo, futhi uhlanganyela izingqungquthela international, izingqungquthela, umsebenzi eziningi ehamba phambili yesayensi. Namuhla, "Medgorodok" Tolyatti ziqasha ayizinkulungwane 3.5. Abasebenzi, lapho abasebenzi bezokwelapha siqukethe ongoti 600 isigaba eliphakeme kakhulu, eziningi zazo babe isihloko odokotela kanye ukhetho wesayensi yezokwelapha.
Umdlavuza, ngeshwa, sekuyisikhathi eside saphela rarity. Minyaka yonke, inani leziguli ukuthi nginesifo inyuka ezinzima ukuze bayothola ukwelashwa labo kanye nosizo isikhungo ezikhethekile, okuyinto yaba kuncike cwaningo Oncology. "Medgorodok" Togliatti has zonke izinsiza yesimanje ukusebenza iziguli.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo umdlavuza inkonzo ziqasha abasebenzi abaqeqeshiwe, okuyinto yakhiwa 45 oncologists abafanelekayo, abahlanu babo ngezinga elithile wabaholi wesayensi yezokwelapha. Inani labasebenzi - abantu abangu-230.
uhlukanisa umdlavuza isikhungo
Lolu cwaningo lokuqala ku yokwamukela iziguli unesifo esibi - "Oncology" - Tolyatti "Medgorodok" wavula ngo 1967, kanye nokunakekela inpatient lahlelwa ngo-1975. Inani leziguli ukuthi nginesifo ezinzima olunezinombolo iziguli 425 okwakudingeka ukuqiniseka kweso lwezokwelapha wokweshumi. legatsha lokuqala iqasha ingqikithi imibhede 40. Ihhovisi Modern based Isibhedlela Clinical № 5 izici:
Ababili boMnyango Oncology.
Amabili Oncology umnyango yokubonisana kanye kusebenta kwahulumende.
Chemotherapeutic linezingxenye ezimbili, enye yazo esibhedlela ngosuku.
IKhabhinethi ukuhlinzwa laser.
IKhabhinethi usizo ngokwengqondo.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo Ungasingatha Tolyatti izakhamuzi laseStavropol esifundeni nomuzi Zhigulevsk ne ukuxilongwa "Oncology". "Medgorodok" Togliatti useyayamukela iziguli amashifu amabili. Lapho ixhumana onkosluzhbu kumele abe iphasipoti, umshwalense wezokwelapha, isiqondiso udokotela ekwelapheni, imiphumela (igazi, esifubeni X-ray kusukela Isibhedlela ikhadi uju akhiphe.).
Ngaphezu ochwepheshe okukhethekile abanomdlavuza enikeziwe ingqalasizinda nezindawo zezempilo buz CO "TGKB inombolo 5". Ukuxhumana olwenziwa abelaphi, nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo, gastroenterologists, neurologists, odokotela bengqondo, ENT. "Medgorodok" Togliatti - isikhungo multidisciplinary, igcwele ezinye zezindawo ezingcono kakhulu abasebenzi idolobha wezokwelapha.
Unyaka ngamunye, izingane kuze kube namakhulu ayisithupha ukumemezela ukukhala kwabo lokuqala "Medgorodok". Rodd Togliatti ingenye ezinhle kakhulu kuleli zwe, iqashe 350 ochwepheshe. Nikeza service izinga:
Amabili elibukelayo umnyango azoya.
amagatsha amabili zokugula yokukhulelwa.
lesigceme ezisanda kubelethwa.
Reanimation futhi labagula kakhulu izinsana.
Reanimation nomnyango izinzwa abadala.
Consulting umnyango zokuxilonga emtholampilo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya.
umnyango lasebekhulile ababelethwa kungakafiki isikhathi.
lesigceme Pediatric (esibhedlela ngosuku).
UMnyango Pathology kule osanda kuzalwa.
Ukuze ukuzalwa komntwana okunempilo emtholampilo umzamo okuningi kuleli ehhovisi - a "Medgorodok" kusukela amakhadi ibhizinisi umtholampilo. Togliatti nokubeletha Isibhedlela inikeza iziguli ukuhlala ukhululekile esibhedlela, okuyinto eye wadala cishe ekhaya.
Abasebenzi friendly inikeza ukunakekelwa kwabakhulelwe, hhayi kuphela bebodwa, kodwa futhi uheha ochwepheshe - abelaphi, owelapha, odokotela bengqondo, bamehlo, urologists, nabanye abaningi, emandleni akhe ukuqinisekisa ngumama ujabule futhi isizukulwane esisha sempilo. Zonke abakhulelwe uma ufaka ewadini sigcine labetibambile izinyathelo zokuxilonga - ultrasound, cardiotocography, Doppler, nabanye.
Ukukhathazeka okukhona mayelana namandla nempilo yezingane emtholampilo livele umnyango yezingane, lapho izingane zihlolwa futhi selashwe udokotela nodokotela bezingane lochwepheshe nakho kweminyaka engu-. Ababili boMnyango ezingane ukuthatha izingane kusukela ekuzalweni ngaphansi sephiko lalo futhi unikeze konke ukwelashwa kunokwenzeka. Lamanje esibhedlela usuku hhayi kuphela lucwaningo izinqubo zokwelapha, kodwa futhi uqhuba imisebenzi zokufundisa abazali nezingane.
Lapha zihlelwe futhi umsebenzi in the "Isikole sikashukela", "Isikole lokulawula isisindo ezinganeni kanye intsha." Ngo emtholampilo izingane ukuhlinzwa, lapho imisebenzi eyenziwa seziguli ezisencane engashiyi izindlela zesimanje. umnyango Ophthalmology unekhono ukusiza abantu abadala nezingane njengoba therapeutically noma surgically.
Ngesisekelo umnyango yezingane usebenza isikhungo ucwaningo kubaluleke international, lapho zokwelapha izidakamizwa kwenziwa kuhlelwe umqondo ukuba ulwe nezifo ezifana lupus, scleroderma, i-rheumatoid arthritis kanye nabanye.
"Medgorodok" Togliatti inikeza izakhamuzi ithuba ukhethe indlela usizo:
Isibhedlela Clinical № 5 - isikhungo lapho amasevisi anikezwa ngaphansi iziqinisekiso isimo ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala. Uhlu kuhlanganisa imisebenzi yokuhlenga, zokwelapha esibhedlela, paramedical, amanye amasevisi yamazinyo, nokunye.
Ukuze zonke iziguli open office services zikhokhwe. "Medgorodok" Togliatti unikeza anhlobonhlobo zokwelapha, zokuxilonga nokwelapha izinyathelo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya noma esibhedlela.
Labo abangena inkontileka komshwalense wezempilo yokuzithandela, kuyancomeka ukuba uxhumane inkampani yomshuwalense kanye nesevisi emtholampilo.
Ukuze uthole i-aphoyintimenti ukuze kusizakale ochwepheshe kufanele ubheke ebhukwini esibhedlela "Medgorodok" (Togliatti). Odokotela belaphe iziguli ngohlelo. Ukuze kube lula izivakashi wangenela inkonzo - electronic ingxenye, okuyinto usindisa isikhathi izivakashi, futhi Aesculapius.
Uhla oluphelele lolwazi amasevisi commercial enikeziwe ehhovisi № 21 isakhiwo zokuphatha, kukhona amakhuphoni bavakashile umuntu ofanele futhi ukukhokhela izinsizakalo. induduzo Sibekezele kanye nekhwalithi yesevisi - ebalulekile emtholampilo, lokhu kusebenza futhi labo uvakashele lapha ikhokhwe akhawunti ( "Medgorodok" Tolyatti), ifoni ukuze uthole ulwazi namarekhodi - 8 (482) 79-00-03 / 04/05.
Kuwo wonke unyaka, izinkulungwane zeziguli nezikhalazo ezahlukene, izifo baphathwe isikhungo ngobukhulu wezokwelapha "Medgorodok" (Togliatti). Amahhovisi kakhulu odokotela ukuthola yokubonga siqu lobuya iziguli zabo. Ezivakashelwa ukwelashwa esibhedlela kubika ukuhlala ukhululekile ekwelapheni eside. Iziguli bathi abahlengikazi emtholampilo kuyahluka Ukuphendula, ukuzimisela ukusiza ngamunye nolwazi kakhulu zebhizinisi.
Kuningi senkulumo omuhle mayelana ekhaya lasebekhulile "Medgorodka". omama abasakhula e ukubuyekeza kubonisa ukuthi got a uhla egcwele services futhi eziningi ubudlelwano ngokufudumele yibo bonke Amahhovisi abasebenzi. Abesifazane wakhuluma izindlu kusebenziseka kalula, imishini yamuva, for the lula kukamama kanye nengane. Siqokomisa ezingeni lelisetulu efaneleyo obstetricians, lapho bazalelwa ingane ephile saka.
Nokho, akubona bonke bajabulela ukuhlala emtholampilo kanye nekhwalithi yemisebenzi ababeyenzile, njengoba etshela Izibuyekezo ezingezinhle. "Medgorodok" Tolyatti ezinye iziguli alethwe ukuphoxeka, kodwa othile yezinkinga ngenxa yokuphathwa kabi ayilungile. Lithi maphambili edeskini kudala uhlu ukulinda, kanye reception bekuhamba kancane kakhulu, iziguli ubuhlungu acute kunzima. Lokhu kwelekelela ukuhlolwa okwenziwa Negative zazinikezwa izikhonzi futhi ezinye odokotela ngubani aphathwe ebusweni nesineke.
Ikheli Isibhedlela № 5 Togliatti Boulevard Health, Ukwakha 25.
Ucingo Imininingwane auto inkonzo: 8 (8482) 2.3.79.
Ukuthola lapho ezokuthutha zomphakathi:
Bus imizila 35, 252, 33, 373, 36 esitobhini "Medgorodok", "Wezingane Hospital".
imizila wamabhasi № № 14 no-15.
Ukwelashwa ngamakhemikhali nokushiswa eJalimane
Ukufakwa kokumqoka kuphela "Metabo": incazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Luthini olwakho "Papazol": Ukwakheka, umthelela
Igama elithi "ukungabaza" lisho: kanjani ukubeka ukhefana?
"I-Ribomunil": okufana, intengo, imfundo, incazelo
Ngingaba ukuphuma yomshuwalense ngumuntu ebhange?